अवस्य हेर्नुहोस : विश्व यस्तोपनि छ, थाहा पाउँने चकित ! – Jagaran Nepal
अवस्य हेर्नुहोस : विश्व यस्तोपनि छ, थाहा पाउँने चकित !
काठमाडौ । विश्वमा यस्ता अनौठो कुराहरु पनि हुन्छन् जुन हामी सहजै विश्वास गर्न सक्दैनौँ । यस्तै एक दृश्य जापानमा देखिएको छ । यहाँको ओशिमा टापुमा बिरालाहरूको सरकार छ भन्दा पनि फरक पर्दैन् । विश्वभरि धेरै टापुहरू छन् । यी सबैको आ–आफ्नै विशेषता हुन्छ । त्यस्तै एउटा टापु जापानमा छ जहाँ संसारका सब भन्दा धेरै बिरालाहरू पाइन्छन् । यसकारण यसलाई बिरालो द्वीप पनि भनिन्छ । यस टापुको नाम ओशिमा टापु हो । जसमा मानिस भन्दा धेरै बिरालाहरु भेटिन्छन् । ओशिमा टापुमा मानव जनसंख्या भन्दा ६ गुणा धेरै बिरालाहरू रहेका छन् ।
एउटा तथ्याङकका अनुसार सन् १९४५ मा यस टापुमा ९०० बिरालाहरु बस्दै आएका थिए । तर अब त्यहाँ बिरालाहरूको संख्या बढेको छ । यस टापुमा बिरालाहरूको संख्या तिव्र रुपमा बढ्दैछ । यो विश्वास गरिन्छ कि मानिसहरु भन्दा यहाँ ६ गुणा बढी बिरालाहरु भेटिन्छन् । यो टापु सुरुमा त्यस्तो थिएन जहाँ केवल बिरालाहरू मात्रै बस्थे । वास्तवमा दोस्रो विश्वयु–द्ध पछि केहि मानिस यहाँ आएर बसोबास गरेको इतिहास रहेको छ ।
वास्तवमा, यहाँ मान्छेहरू माछा मा र्ने व्यवसाय गर्थे । यस बाहेक, यस आइसल्याण्डमा कपडाको काम पनि गरिएको थियो । तर यहाँ अचानक मुसाको आ–तंक सुरु भयो । यस कारणले, कपडा व्यवसायीहरूले समस्याको समाधान खोज्न थाले । किनकि मुसाले अक्सर कपडा काट्ने गर्थ्यो । मानिसहरु यसको क्षतिबाट निकै ठुलो पिडामा परेका थिए । मुसाको आ–तंकबाट मुक्त हुन, मानिसहरूले बिरालाहरू पाल्न थाले । धेरै मानिसहरूले नजिकका शहरहरूबाट जोडी बिरालाहरू किनेर ल्याँई तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा हुर्काउन शुरू गरे । केहि दिनमा, सकारात्मक नतीजा यहाँ आउन थाल्यो ।
बिरालाहरूको आगमनले गर्दा, मुसाको आ–तंक कम हुन थाल्यो । सबै जना धेरै खुसी थिए । उनीहरुको काम भइरहेको थियो । मुसा नियन्त्रण गर्न सफल भएपछि यहाँ क्षति हुन पनि छाड्यो । अब मुसाहरुले कपडा व्यवसायमाथि कुनै खालको असर गर्न सक्ने अवस्था थिएन् । मुसाहरु नियन्त्रण भएपछि यहाँ सुरुमा सबै ठीक थियो । मानिसहरु आफ्नो कामको बारेमा उत्साहित थिए । तर मान्छेहरु आफ्नो बढ्दो चाहानाले यहाँको जीवनदेखि खुःशी हुन सकेनन् । यस आइसल्याण्डमा अरू पनि धेरै समस्याहरू थिए । यहाँ जीवन सुधार गर्न कुनै आवश्यक सुविधा थिएन । यहाँ अस्पताल र बजारको सुविधा थिएन ।
सम्पूर्ण टापुमा एउटा मात्र स्कूल थियो । त्यो पनि चाँडै बन्द भयो । नतिजा स्वरूप, यहाँका मान्छेहरु शहरतिर बसाई सर्न उत्प्रेरित हुन थाले । दुई परिवारहरूको प्रस्थानको साथ शुरू भएको श्रृंखला चाँडै नै सामान्य भयो । त्यस पछि, आइसल्याण्ड बिस्तारै मानवविहीन हुँदै गयो । एकातिर, मानिसहरूको संख्या घट्दै गइरहेको थियो, अर्कोतर्फ बिरालाहरूको प्रजनन जारी थियो । यस कारणले गर्दा यस टापुमा बिरालाहरूको संख्या मानवको भन्दा बढी भयो । जापानका मानिस बिरालोलाई धेरै माया गर्छन ।
जापानीहरु बिरालो पाल्नु उनीहरूका लागि धेरै शुभ हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन् । जापानका धेरै पसलहरूले आफ्नो पसल बाहिर विशेष प्रकारको पुतली राख्छन् जसले गर्दा बिरालोहरू त्यहाँ आउँदछन् । तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यदि बिरालो त्यहाँ आईपुग्यो भने तिनीहरूको पसलमा ग्राहकहरूको संख्या बढ्छ । जापानी मानिसहरुको बिरालोहरुसंग लामो सम्बन्ध रहेको छ । यो विश्वास गरिन्छ कि त्यहाँका मानिसहरु १,००० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि बिरालासँगै बाँचिरहेका छन् । मानिसहरु घरको सदस्यको रूपमा बिरालो पाल्दै आएका छन् । उनीहरु बिभिन्न किसिमले बिरालोसँग जोडिएका छन् । जापानका केही क्षेत्रमा बिरालाहरूको पूजा पनि गरिन्छ । त्यहाँ धेरै पूजा स्थलहरु छन् ।
ओशिमा आइसल्याण्डमा भेट्टाइएको बिरालाहरूको संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्थाले त्यहाँका मानिसहरूले उनीहरूलाई कति माया गर्छन भनेर देखाउँछ । बिरालोहरूको बढ्दो संख्या ख तर नाक हुन सक्छ, यसको बाबजुद पनि, त्यहाँको सरकारले तिनीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ । प्रमाण यो छ कि ओशिमा टापुमा सरकारले कुकुरहरूलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा बिरालाहरूलाई बचाउन सकिन्छ । यस टापुमा अहिले पनि छिटपुट मान्छेहरु बस्ने गरेका छन् । अहिले पर्यटकहरुका लागि एक आर्कषक केन्द्रका रुपमा पनि यो टापु रहेको छ । त्यस टापुको सरकार बिरालोको छ । बिरालोलाई नै सरकार मानेर मानिसहरुले निर्णय लिन्छन् ।
बच्चा जन्माउन पनि हाकिमको अनुमति लिनुपर्ने